धमाधम किन मर्दैछन् गैडा ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
धमाधम किन मर्दैछन् गैडा ?
काठमाडौं । कसिंगे गैंडाको चोरीसिकार झन्डै शून्यमा झरे पनि चितवन निकुञ्जमा पछिल्ला केही वर्षयता गैंडाको बढ्दाे प्राकृतिक मृत्यु सरकार र विशेषज्ञका लागि चुनौती बनेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक कारणले मात्र २५ वटा गैंडा मरेपछि सरकारले कारण खोज्न थालेको हो ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार इकोलोजिष्ट पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मरेका २५ गैंडामध्ये ११ वटा आपसमा जुधेर मरेका हुन्। मरेकामध्ये अधिकांश बयस्क गैंडा हुन्। अन्यमा केही खाडलमा फसेर, बुढो भएर र केही बिरामी भएरसमेत मरेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार १० वर्षे द्वन्द्व उत्कर्ष पुगेको बेला आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा पनि जम्मा २४ गैंडा मरेका थिए। त्यसमध्ये धेरै गैंडा सिकारीले मारेका हुन्। त्यस अघि २०५७/५८ मा भने सिकारीले ३७ वटासम्म गैंडा मारेका थिए।